मन्त्री अर्ब, पीए करोड कमाउने धन्दामा छन्, कसरी आउँछ समाजवाद ? : घनश्याम भुसाल..हेर्नुहोस् ।
August 5, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on मन्त्री अर्ब, पीए करोड कमाउने धन्दामा छन्, कसरी आउँछ समाजवाद ? : घनश्याम भुसाल..हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं । नेकपाका वैचारिक नेता घनश्याम भुसालले देश दलाल पुँजीपतिको हातमा रहेका कारण कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पनि कमाउधन्दामा लागेको बताएका छन् । १० वर्षमा मन्त्री अर्बपति र पीए करोडपति हुने गरेको उनको भनाइ छ ।यो खबर yeskathmandu मा प्रकाशित छ । ‘देश दलाल पुँजीपतिको हातमा छ । सबैलाई पुँजी चाहिएको छ, । देशको समृद्धि होइन, […]
प्रहरी प्रमुख बन्न नौ करोडको प्रस्ताव: पूर्ब डिआईजी थापा
August 5, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on प्रहरी प्रमुख बन्न नौ करोडको प्रस्ताव: पूर्ब डिआईजी थापा
अर्जुन बराल | धापासी काठमाण्डौको महाराजगंज बसुन्धरा नजिकै रहेको एउटा सामान्य घरभित्रबाट आउँने हिन्दुधर्म भित्रका ति मिठा अनि देवदेवताका लोभ्याउँने शैलीका ती श्लोकहरुको लय सुनिसकेपछि बाटोमा हिडिरहेको मेरो मनमा कौतुहलता जाग्यो, साच्चीनै हेर्दा शिक्षित बर्गको जस्तो देखिने यो घर अनि धर्मप्रतिको लगाव नबुझी अगाडी बढ्नै मन मानेन, दाँयाबाँया नहेरी गेट्मै पुगेर बेल बजाएँ ।यो खबर […]
कृष्ण र रुपा मुम्बईमा भेटिए यस्तो अवस्थामा..हेर्नुहोस् ।
August 5, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on कृष्ण र रुपा मुम्बईमा भेटिए यस्तो अवस्थामा..हेर्नुहोस् ।
कृष्ण ओलीको दुवै हात हाल्न गत सुक्रबार मुम्बई पुगे, कृष्णको हात हाल्न कति दिन लाग्छ भन्ने बारे अझै थाहा भएको छैन ।कृष्णको हात जोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ । खुट्टा जोडिसकेका कृष्णको अब हात पनि चांडै हाल्ने भएको छ। कृष्णले हात हाल्ने भएपछी रुपा मगर ओली निकै उत्साहित देखिन्छिन। कृष्णको सक्लो हात भएको त्यो क्षणको पर्खाइमा […]
बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्न सरकारै डराउँछ : धीरज राई
August 5, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्न सरकारै डराउँछ : धीरज राई
अहिले मेरो अभियानमा कुलमान घिसिङ, डा. गोविन्द केसी, महावीर पुन, डा. सन्दुक रुइत, राजेश हमाल, शृंखला खतिवडा, सीताराम कट्टेल, दयाहाङ राईलगायत ५० जनाभन्दा बढीको सहयोग छ । उहाँहरूको साथले हौसला मिलेको छ । अबको १० वर्षपछि म विश्वका सबै ठाउँबाट बुद्ध भारतमा जन्मेको भ्रम हटाएरै छोड्छु । बुद्ध नेपालमै जन्मिएका थिए भन्दै हिँड्नुभएको छ, किन ? म २००६ […]
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४ किलो सुन बरामद
August 5, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४ किलो सुन बरामद
साउन २०, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४ किलो अवैध सुनसहित एक जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले सुनसहित ली निंछीलाई पक्राउ गरेको हो । हङकङ हुँदै काठमाडौं आएका उनको लगेजमा सुन भेटिएको प्रहरीको भनाई छ | यो पनि…प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर उपचार खर्च सम्बन्धी सरकारले यस्तो निर्णय गर्यो..हेर्नुहोस् । पधानमन्त्री केपी […]
उडिरहेकाे बिमान भित्रै नेपालका पूर्व मन्त्री बेहाेस भएपछि…
August 5, 2019 August 5, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on उडिरहेकाे बिमान भित्रै नेपालका पूर्व मन्त्री बेहाेस भएपछि…
काठमाडौं/ बुद्ध एयरको एटीआर विमान नेपालगञ्जबाट काठमाडौँतिर उडिरहेको थियो । नारायणीदेखि उत्तरपश्चिमको पहाडमाथि आकाशमा पुग्दा विमान १५ हजार ५ सय फिट उचाइमा थियो । जहाजभित्र एयरहोस्टेस कृति झा र सुरक्षा अधिकारी यात्रुलाई पानी बाँड्दै थिए । जहाजको मध्यभागमा एक यात्रु एक्कासी बेहोस भएपछि खैलाबैला भयो । १३ नम्बरको सिटमा बसिरहेका ती यात्रु थिए, सुर्खेतका ६० […]
जापानमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो बुद्धको मुर्ति बनाउदै नेपाली मुर्तिकाहरु : सम्मान स्वरुप १ सेयर गर्नुहोला (भिडियो )
August 5, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on जापानमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो बुद्धको मुर्ति बनाउदै नेपाली मुर्तिकाहरु : सम्मान स्वरुप १ सेयर गर्नुहोला (भिडियो )
जापानको कामिआमाकुसा शहरको एउटा विशाल पहरामा बुद्धको मूर्ति कुँदिदै छ । यस्तो विशाल मूर्ति निर्माणको नेतृत्व गर्दैछन् प्रदेश १ को मोरङको उर्लाबारीका मूर्तिकार मञ्जुल मितेरी नेपालकै मूर्तिकारहरू सानुभाइ विश्वकर्मा, रामचन्द्र पण्डित, गणेश वान्तवा राई लगायतका मूर्तिकारहरू सो मूर्ति निर्माणमा सक्रिय छन् सन् २०१६ को सेप्टेम्बरबाट शुरु भएको विशाल मूर्ति निर्माण अभियानमा दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढी […]
अख्तियारका पदाधिकारीको मिलेमतोमा नयाँ बसपार्कमा जग्गा कब्जा भएको खुलासा..हेर्नुहोस् ।
August 5, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on अख्तियारका पदाधिकारीको मिलेमतोमा नयाँ बसपार्कमा जग्गा कब्जा भएको खुलासा..हेर्नुहोस् ।
देशकै मुख्य बसपार्क मध्यै एक गंगवु स्थित नयाँबसपार्कको १६० रोपनी सरकारी जग्गा झ्वाम पार्ने गरि पुरक सम्झौता बनाएको रहस्य बाहिर आएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र नयाँ बसपार्क सञ्चालक ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडबीच १६० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गरी गैरकानुनी ‘पूरक सम्झौता’ भएको फेला परेको छ। ल्होत्सेले मूल सम्झौताविपरीत नयाँ बसपार्कमा गैरकानुनी रूपमा बनाएको व्यापारिक […]